Taliyaha cusub ee ciidamada Kenya Gen Kobochi oo booqasho qarsoodi ah ku tegey Jubbaland | Jowhar Somali news Leader
Home News Taliyaha cusub ee ciidamada Kenya Gen Kobochi oo booqasho qarsoodi ah ku...
Taliyaha cusub ee ciidamada Kenya Gen Kobochi oo booqasho qarsoodi ah ku tegey Jubbaland
Taliyaha cusub ee dhowaan uu Madaxweynaha dalka Kenya u magacaabay inuu hogaamiyo ciidamada KDF Gen Robert Kibochi ayaa dhowaan booqasho qarsoodi ah ku yimid dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaano ka tirsan Jubbaland.
Generalka ayaa la sheegay inuu booqday xeryo ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya ee gudaha dalka Soomaaliya isagoo la kulmay saraakiisha ka howlgasha xeryahaas.
Waaxda Difaaca dalka Kenya ayaa baahisay sawiro Generalka oo la socda qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada Kenya ee ku sugan dalka Soomaaliya.
Taliyaha cusub ee Militariga Kenya Robert Kibochi ayaa ciidamada dalkiisa ku amaanay sida ay u shaqeynayaan isaga oo ku tilmaamay geesiyaal, naf iyo waqti u huray howlgalka AMISOM iyo la dagaalanka waxa uu ugu yeeray Argagixisada.
Booqashadan oo aan hore loo sii shaacin ee Taliyaha Militariga Kenya Robert Kibochi ayaa kusoo beegantay bil kadib markii loo magacaabay Taliyaha Ciidamadda Difaaca Kenya, isaga oo go’aan saday in uu qiimeyn ku sameeyo Askarta KDF ee Soomaaliya kuna howlgalaya AMISOM.